Dharka caadiga ah ee Veracruz, isku-dhafka u dhexeeya dhaqamada Mexico iyo Isbaanishka | Wararka Safarka
Luis Martinez | | dhaqanka, Mexico
Dharka caadiga ah ee Veracruz wuxuu ka jawaabayaa, hal dhinac, aaladda 'autochthonous substrate' ee gobolkan Mexico iyo, dhanka kale, saamaynta gumeystayaashii Isbaanishka. Waa run in magaalo kasta oo aagga Veracruz ah iyo xitaa waddanka oo dhan leeyihiin iyaga u gaar ah dharka caadiga ah, laakiin waxaa jira suud qeexaysa gobolka oo dhan iyo caasimadiisa.
Tan iyo Veracruz waa xeebta bari ee Mexico oo waxay leedahay cimilo kulul oo kuleyl ah, dharkeeda caadiga ah waa inay ahaato, xoog, fudeyd oo aan aad u diiran. Heerkulka celceliska ah ee ka sarreeya labaatan darajo looma dulqaadan karo sanadka oo dhan oo leh dhar diirran. Laakiin waxaa jira xubno kale oo badan oo go'aamiyay dharka caadiga ah ee Veracruz. Haddii aad rabto inaad iyaga ogaato, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Taariikhda dharka caadiga ah ee Veracruz
2 Waa sidee suugaanta jarocho
2.1 Dharka caadiga ah ee Veracruz ee haweenka
2.2 Dharka caadiga ah ee Veracruz ee ragga
3 Goorma ayaa loo isticmaalaa dharka jarocho-ka caadiga ah?
Taariikhda dharka caadiga ah ee Veracruz
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan kuu tilmaanno waa in gobolka Veracruz sidoo kale uu isticmaalo suud charro iyo Dharka dharka Tehuano. Tan dambe waxaa adeegsaday dumarka Zapotec ee gobolka Oaxaca waxaana ku dhintey rinjiile Frida khalo in badan oo ka mid ah sawiradiisa. Laakiin tan iyo tan hore labaduba waxay noqdeen astaamaha adduunka ee Mexico. Sidaa darteed, kaa yaabin maayo inay iyaguna yihiin nooc ka mid ah Veracruz.
In kasta oo wax kasta oo aan hadda kuu sharaxnay, haddana dharka caadiga ah ee 'Veracruz par' par heer sare ah ayaa loo yaqaan jarocho suud, taas oo ka timaadda waxa loogu yeero Sotavento Veracruzano, taasi waa in la yiraahdo, ee gobolka gobolka sidaa loo qoondeeyey ee ku fidiya koonfurta isla hal. Sidoo kale, dharkani wuxuu leeyahay taariikh aad u xiiso badan.
Waxaa la sheegay in haweenkii ugu horreeyay ay la yimaadeen Isbaanishka Basaasta Papaloapan waxay xiran jireen dharka laga keenay Jasiiradda Iberia. Ay ahaayeen Dharka qaabka Andalusian ama Levantine lagu sameeyay dhar madow iyo culus. Laakiin aaggan Veracruz, sidaan kuu sheegnay, waa mid aad u kulul oo, marka lagu daro, qoyaanku wuu badan yahay. Sidaa darteed, dharka laga keenay Spain ma ahayn mid ku habboon, maadaama loo sameeyay cimilo qabow.
Suudhadhkan haweenku waxay ka koobnaayeen goonno midabo badan leh, macawis daabac leh, shalmad dhejis ah, sharabaaddo cudbi ah, iyo kabo jilicsan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagu sharraxay billado qoorta loogu dhejiyay xargaha silk ama velvet lafteeda.
Si kastaba ha noqotee, haweenka waddanka u dhashay waxay soo xirteen goonno ubax leh iyo blouses oo leh xargaha bobbin iyo garbaha hoos u dhaca, iyo sidoo kale kabo u eg qaabka xirmooyinka. Isbaanishku wuu fahmay sida dharka ugu habboon loogu talagalay jawiga Veracruz waxayna bilaabeen inay ka tagaan dharka ay ka keeneen Spain.
Sida isku dhafka ah ee dharka maxalliga ah qaar ka mid ah saamaynta Hispanic, ka jarocho suud, kaas oo waliba qaatay foomam lamid ah ragga. Waxay ahayd, sidaas darteed, Nidaamka isku-dhafka u dhexeeya moodada peninsular iyo kan asalka ah ee Sotavento Veracruzano. Intaa waxaa dheer, qalab iyo qurxin ayaa lagu daray.
Mar alla markii aan waxyar ka qabanay taariikhda, waxaa la joogaa waqtigii aan si cad oo faahfaahsan u sharxi lahayn sida dharka caadiga ah ee Veracruz u eg yahay.
Waa sidee suugaanta jarocho
Caqli ahaan, si loo sharaxo dharka caadiga ah ee Veracruz, waa inaan kala saarnaa dharka dumarka iyo kan ragga. Si kastaba ha noqotee, labaduba waxay leeyihiin laba hooseeyayaal guud: midab cad iyo maryo fudud ku habboon kuleylka.
Dharka caadiga ah ee Veracruz ee haweenka
Dharka Jarocha ee haweenka ayaa ah xitaa qurux badan ka badan tii loogu talagalay ragga, maadaama ay leedahay xargo badan, dhejis iyo qurxin. Waxyaabaha aasaasiga ah ee dharkan ayaa ah kuwa soo socda:
Boodh noocyo ah dharka hurdada caddaan ka samaysan cudbi iyo "mesh" garbaha iyo laabta. Tani waxay ka dhigan tahay, in qaybahaas, ay leeyihiin daabac qaab qaab shabag ah. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu dhammeeyaa qoorta iyadoo leh barrette lagu sameeyay xarig xariir ah.
Petticoat sidoo kale waa caddaan oo sidoo kale hoosta ayaa lagu dhejiyay salka loo isticmaalo asal ahaan.
Una goonno aad u dheer oo ballaaran oo dul heehaabaya dusha sare ee dusha sare ee daboolaya anqawyada oo waliba badanaa caddaan ah Sidoo kale, waa lagu qurxiyey daabacaad oo lahaan jiray xoogaa xabag ah.
Apron ka gaaban maro jilicsan oo madow oo lagu xardhay ubaxyo midab casaan leh iyo sidoo kale xarig curly ah. Waxay ku xidhan tahay dhexda iyadoo loo marayo a xarig xariir ah oo suunkiisa ayaa ku yaal bandana oo ka samaysan cudbi, taas oo ah, maro gacmeed weyn oo ka samaysan maro laba midab leh oo daabacan.
Una mantilla ama shaal oo laga samayn karo xarig ama tulle tolliimo leh. Waxaa la dhigayaa garbaha ku dheggan laabta iyadoo loo marayo a xirmo ama koomo si loo muujiyo mesh-ka dharka guntiga ee hoose.
Un shawl ama shawl labaad oo si hufan loogu sameeyay dunta xariirta taasna waxaa lagu daray xargaha qurxinta timaha.
Haweeney xiran dharka jarocho
Dhamaan waxyaabaha kor ku xusan, dharka caadiga ah ee Veracruz ee haweenka waxaa ka mid ah qalab kala duwan y timo gaar ah. Marka laga hadlayo tan dambe, waxay ka kooban tahay buunsharo iyo laba tidcan oo lagu sharraxay madax-madax sida shanlo, oo sidoo kale loo yaqaan cachirulo. Ugu dambeyntiina, timaha waxaa lagu qurxiyaa loo yaqaan 'gardenias' ama '' ubax '' oo la dhigo dhinac ama midka kale ee madaxa iyadoo ku xiran hadba xaaladda guur ee qofka. Haddii ay kalid tahay, waxay aadaan dhanka bidix, halka haddii ay guursato, ay aadaan dhinaca midig.
Sida qalabka dharka caadiga ah ee Veracruz ee haweenka, a taageere qoorta laga sudhay iyadoo la adeegsanayo a dabka. Tani badanaa waa dahab qoys. Waxaa laga samayn karaa dahab ama luul, laakiin sidoo kale dhuxul ama filigree. Ugu dambeyntiina, xaaladaha qaarkood iskutallaabtu waxay sidoo kale ku xiran tahay qoorta maro jilicsan.
Dharka caadiga ah ee Veracruz ee ragga
Wax badan ka fudud in tan kore ay tahay dharka caadiga ah ee Veracruz ee ragga. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa mid aad u qurux badan oo, sidaan kuu sheegnay, waxay u taagan tahay midabka cad ee dharka oo dhan. Xaaladdan oo kale, kuwa ugu muhiimsan ayaa ah kuwa soo socda:
Un surwaal oo ka samaysan dhar cusub oo gaadha cagaha, taas oo ah, si ka duwan dharka kale ee caadiga ah, ma aha mid culus ama jilib-dherer ah.
Una guayabera ama shaati gacmo dhaadheer leh, dabacsan oo waliba ka samaysan dhar fudud oo boorsooyin ku leh xagga hore. Waxay sidoo kale badanaa leedahay murugo si ay u siiso taabasho xarrago.
Nooca kabaha bililiqada iyo midab madow ama cadaan ah.
Koofiyad Palm oo leh afar jajab aaggiisa sare (waxa loo yaqaan "dhagax").
Is daji ama marooji weyn oo midabyo dhalaalaya leh, doorbidaya casaan iyo madow, qoorta.
Sidaan kuu sharaxnay waadna ka dheehan kartaa tilmaantayada, dharka caadiga ah ee Veracruz ee ragga ayaa aad uga yar sharaxaad ka badan kan dumarka. Si kastaba ha noqotee, isku daraa si dhammaystiran tan.
Kooxda Muwaadiniinta Veracruz oo leh dharka caadiga ah
Goorma ayaa loo isticmaalaa dharka jarocho-ka caadiga ah?
Guud ahaan, dharka jarocho waxaa loo isticmaalaa gudaha dhacdo kasta oo folkloric ah ama fasax loo dabaaldego gobolka Veracruz. Kooxo dhaqameedyo badan oo dhaqameed ayaa u adeegsada, si hufan, inay u fasiraan Waxay yihiin jarocho ama zapateado. Waxaa jira laba nooc oo dhaanto ah: labo dhawaaq iyo waxa loogu yeero "Ka soo tuulidda" koox kooxeed.
Muusikada la socota ayaa lagu garaacayaa qalab dhaqameed si isku mid ah sida jarana, gitaar yar; requinto, oo ka soo jeeda isla reerkii hore; iyo kataarad, iyo daf iyo daaman dameer, oo markii dambena waxaa loo dhawaa daf. Iyaga oo dhan ayaa loo fasiray laxanka asalka beeraleyda, kuwaas oo qaarkood caan ka noqdeen adduunka. Tusaale ahaan, La Bamba, Hustler o Sharoobada waalan.
Iyaguna waa la fasiray huapangos.
Dhinaca kale, waxaad sidoo kale xiiseyn doontaa inaad ogaato goorta dabaaldegyadan ay dhacayaan. Marka, haddii aad qorsheyneyso inaad booqato Veracruz, waxaad safarkaaga ka dhigi kartaa mid iyaga la mid ah. Mid ka mid ah taariikhaha la tilmaamay waa damaashaadka oo ka yimid magaalada Veracruz lafteeda, oo lagu tilmaamay "adduunka ugu farxadda badan."
Laakiin adduunka Jarocho wuxuu hoy ka helay magaalada Jaltipan, laga bilaabo gobolka Veracruz laftiisa. Dhamaadka sanadka magaaladan ayaa abaabusha Bandhig Fandango, kaasoo isu keena fanaaniinta muusikada caanka ah ee ka kala yimid daafaha dalka iyo xitaa dibedda. Sidaa darteed, dhawaqa jarocho iyo qoob ka ciyaarku kama maqnaan karo dhacdadan.
Sidoo kale, dhaqanka Jarocha wuxuu xididdo hoose ku leeyahay magaalada Córdoba, sidoo kale loo yaqaan Lomas de Huilango, ilaa heer ay abaabusho a Son Jarocho Encounter oo ay ku jiraan bandhigyo wata dharka caadiga ah ee Veracruz. Laakiin sidoo kale howlo kale sida aqoon isweydaarsiyo, shirar, shirar iyo xitaa howlaha gala si loo ilaaliyo dhaqankan soo jireenka ah ee gobolka Veracruz.
Jarocho qoob ka ciyaarka
Ugu dambeyntiina, waxaan kaaga warrami doonaa magaalada Tlacotalpan, kaas oo si sax ah ugu yaal xadka basin Papaloapan, halkaas oo, sidaan kuu sheegnay, dharka jarocho uu ku dhashay. Magaaladaan quruxda badan, oo xarunteeda taariikhiga ah looga dhawaaqay Dhaxalka dhaqanka Aadanaha, ayaa lagu xusaa Shirka Jaraneros iyo Decimistas. Waa xaflad loogu talagalay in lagu ilaaliyo dhammaan muujinta muusikada ee lagu soo ururiyey wiilka jarocho waana mid ka mid ah dhacdooyinka hiddaha ee ugu muhiimsan dhammaan Mexico.
Gabagabadii, waxaan kuu sharaxnay waxa asal ahaan ka soo jeeda dharka caadiga ah ee Veracruz, iyo waliba dharka ay ka samaystaan ​​dumarka iyo ragga. Iyo, sidoo kale, waa maxay xafladaha ugu caansan ee lagu xidho. Si kastaba ha noqotee, waa mid ka mid ah dharka hiddaha leh xidid badan oo aad loo qadariyo dalka Mexico oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mexico » Dharka caadiga ah ee Veracruz